★မြန်မာ့အလင်း★: ကိုလိုနီခေတ်က ပိုကောင်းတယ်လို့ ပြောတဲ့ ရူးကြောင်ကြောင်များအတွက်
ကိုလိုနီခေတ်က ပိုကောင်းတယ်လို့ ပြောတဲ့ ရူးကြောင်ကြောင်များအတွက်
ကျုပ်တို့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ ရေးမထားတဲ့ စည်းကမ်းလေးတွေရှိပါတယ်။ မွတ်ဆလင်မှာ လူသတ်၊ မုဒိမ်းကျင့်ဖို့ သင်ကြားချက်တွေရှိပေမယ့် မဝေဖန်ရဘူး။ အနောက်ဖက်အစိုးရတွေ လူသတ်တာ အထောက်အထားရှိနေပေမယ့် မဆွေးနွေးရဘူး။ အဲဒီစည်းကမ်းကို မလိုက်နာရင် ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်း ဖန်တီးသူ၊ အနောက်ဖက်ကို မုန်းတီးသူစသဖြင့် တံဆိပ်တပ်ခံရပါမယ်။ ဒါ့ကြောင့် နိုင်ငံရေးသမားတွေဟာ မြန်မာအချင်းချင်း (ကယား၊ ကရင်၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ဗမာတွေကို ရည်၇ွယ်ပါသည်) မကြီးမငယ်ရန်ဖြစ်တာနဲ့ စောက်တင်းပြောတာတွေပဲ လုပ်နေတာထင်ပါတယ်။ တကယ်ဆိုရင် မြန်မာအချင်းချင်း စောက်တင်းပြောရန်ဖြစ်နေတဲ့ နအဖ၊ ဒီမို၊ တတိယလူတွေကို မြန်မာမုန်းတီးနေသူလို့ တံဆိပ်တပ်သင့်တာပေါ့နော်။
တလောတုံးက မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမားကြီးတစ်ယောက်က ကိုလိုနီခေတ်မှာ အင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်တာက ပိုပြီးကောင်းတယ်လို့ ပြောတဲ့ကော်မန့်ဖတ်ပြီးကတည်းက စဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့ ဆောင်းပါးတွေ မကြာခဏဆိုသလို ရေးတင်ဖြစ်ပါတယ်။ အထက်က ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရင် အင်္ဂလိပ်/ ကနေဒါ အစိုးရဟာ ကနေဒါမှ တိုင်းရင်းသားတွေအပေါ် ဘယ်လောက်အထိရက်စက်လဲဆိုတာ မြင်တွေ့ရမှာပါ။ ကနေဒါဆိုတာ အမည်းတွေ ကျွန်ဘ၀က လွတ်မြောက်ရေးမှာ စွမ်းစွမ်းတမံ ကူညီပေးခဲ့တယ်ဆိုပြီး ဂုဏ်သတင်းကြီးကို ထုတ်လွှင့်ထားတာပါ။ အမှန်တကယ်ပဲ အမည်းတွေအပေါ် ကောင်းခဲ့သလား ဆိုတာကတော့ ပုထုစဉ်လူသားဖြစ်တဲ့ တောသားနှစ်ယောက်မှာ စဉ်းစား ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းမရှိပါ။ ဒါပေမယ့် အခု ဒီဗီဒီယိုထဲက အထောက်အထားတွေအရ အဲဒီသမိုင်းအပေါ်မှာ သံသယတွေ ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားကလေးငယ်တွေဟာ အသက် ၅နှစ် ကျောင်းထားရမယ့် အရွယ်ရောက်ရင် အင်္ဂလိပ်အစိုးရနဲ့ ခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီးတွေက လာရောက်ပြီး လုယူကြပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ကစပြီး ကလေးတွေကို မိဘအရင်း၊ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ တစ်သက်လုံးကို တွေ့ခွင့် မပေးတော့ပါဘူး။ တနည်းအားဖြင့် မိဘတွေဟာ ကလေးတွေကို ၅နှစ်အထိပဲ ကြည့်ရှုခွင့်ရပြီး တစ်သက်လုံး ရှင်ကွဲ၊ သေကွဲ ကွဲကြရပါတယ်။ စာနာစိတ်တော်တော်ကို ကင်းမဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်တွေပါ။ သူတို့ ခရစ်ယာန်ကျောင်းထဲမှာလဲ လူလိုထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှု အမျိုးမျိုးလုပ်ပါတယ်။ မိန်းခလေးတွေဆိုရင် ၇ နှစ် ၆ နှစ်လောက်မှာ ဗိုက်ကြီးကြပါတယ်။ အဲဒီကလေးငယ်တွေက မွေးဖွားတဲ့ ကလေးလေးတွေကို ဘယ်လိုလုပ်တယ်ထင်ပါသလဲ? မီးလင်းဖိုထဲကိုထည့်ပြီး အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့သတ်ပြစ်တာပါ။ ဗီဒီယိုထဲမှာ ကလေးငယ်တွေကို သေတဲ့အထိ အစာမကျွေး၊ ရေမတိုက်ပဲ အခန်းထဲမှာ ပိတ်ထားတာ။ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ မြေတွေကို လုပြီးရောင်းစားပြစ်တာ။ ကျောက်ရောဂါနဲ့ အဆုတ်ရောဂါတွေကို ကူးစက်အောင် လုပ်ပြီး သတ်ပြစ်ခဲ့တာတွေ . . . . စတဲ့ ရက်စက်မှုတွေ လုပ်ခဲ့တာမြင်ရမှာပါ။ အဲဒီလိုသတ်ဖြတ် လုပ်ကြံမှုတွေမှာ ကနေဒါအစိုးကိုယ်တိုင် ပတ်သက်နေပါတယ်။ (ကျုပ်တို့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမားတွေက ကိုလိုနီခေတ်က အခုထက်ပို ကောင်းတယ်လို့ ပြောနေတော့ ဘယ်လောက် ရူးကြောင်ကြောင်နိုင်လဲဆိုတာ မြင်သာပါတယ်)
ကြောက်သွားပြီလား? ဘာအခုမှ ကြောက်နေတာတုံး။ 9/11 ဘယ်သူက လုပ်လဲ ရှင်းရှင်းကြီးမြင်နေပါလျက်နဲ့ အခုမှ ကြောက်တယ်ဆိုရင် ရယ်စရာဖြစ်နေပြီနော်။ အဖြူတွေကို မုန်းသွားပြီလား? ဘာမှမဖြစ်နဲ့။ အဖြူတွေထဲမှာ ကောင်းတဲ့အဖြူတွေ ရှိပါတယ်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာမှာ လူသတ်ဖို့ သင်ကြားချက်တွေရှိတဲ့အတွက် မကောင်းတာ မှန်ပေမယ့် ယုတ်ညံ့တဲ့ မွတ်ဆလင်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်တွေးခေါ်ခြင်း မပြုဖို့ပြောပါရစေ။ လူသားအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေမှာ မွတ်ဆလင် တစ်ကောင်မှ မရှိပဲ၊ ခရစ်ယာန်အများစုကိုသာ မြင်တွေ့နေရတဲ့ အချက်ကို သတိထားကြည့်နိုင်ပါတယ်။ စစ်ပွဲ၊ ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်း၊ နိုင်ငံရေးအရှုပ်အထွေးစတဲ့ မကောင်းတဲ့ ကိစ္စတိုင်းမှာ မွတ်ဆလင်အမြောက်အများ ပတ်သက်နေတာလဲ ထည့်စဉ်းစားပါဦး။ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာလည်း ကောက်ကျစ်ယုတ်မာသူတွေ အများကြီးပါ။ အဓိကကပြဿနာရဲ့ အရင်းအမြစ်ဟာ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးဆိုတာထက် လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတွေသာဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာလို့အမည်ခံထားပြီး လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတွေ ကြီးထွားနေလို့ ကျုပ်တို့ မြန်မာပြည်မှာ ပြည်တွင်းစစ်ကြီးဖြစ်နေတာ မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ။ နှစ်ပေါင်း ၆၀ကျော်အထိ မကြီးမငယ်ရန်ဖြစ် စောက်အတင်းပြောနေတာကလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမားတွေပါ။
သတိထားဖို့က အဖြူတွေသတ်နေတာ သူများ လူမျိုးတွေကိုပဲ မဟုတ်ဘူးနော်။ သူတို့အဖြူအချင်းချင်းလဲ ပြန်သတ်နေတာပဲ။ 9/11 ၊ 7/7 ၊ ကာကွယ်ဆေး၊ GM food စတဲ့ ကိစ္စတွေကို ဥပမာအဖြစ် ကြည့်ပေါ့။ ထို့အတူပဲ မွတ်ဆလင်တွေဟာ တခြားဘာသာဝင်တွေကို ကောက်ကျစ် ယုတ်မာသလိုပဲ သူတို့အချင်းချင်းလည်း လိမ်ညာပြီး ယုတ်မာနေကြတာပဲ မဟုတ်လား? သူများလူမျိုးကို အထင်ကြီးပြီးဖင်ရက်ချင်တဲ့ မြန်မာများဖြစ်တဲ့ ကချင်၊ ကရင်၊ ကယား၊ ရခိုင်၊ ဗမာ၊ ပအို့၊ ရှမ်းတွေ စဉ်းစားတွေးခေါ်ဖို့ ဆက်လက်ပြောချင်ပါတယ်။ လူရဲ့သဘာဝဟာ သူတပါးအပေါ်မှာ အနိုင်ကျင့်လိုကြပါတယ်။ သူများလူမျိုးတွေအပေါ် မတရားလုပ်နေရရင် ပျော်ရွှင်ကြပါတယ်။ နိုင်ငံရေးသမားတွေမှာလဲ မိမိနဲ့ ၀ါဒမတူတဲ့သူတွေကို မတရားလုပ်နေရင် လက်ပိုက်ကြည့်လိုကြပါတယ်။ အဲဒီအမူအကျင့်တွေဟာ အတ္တစိတ်ကို အစွန်းရောက်အောင် လုပ်ပေးနေတာပဲ။ (တနည်းအားဖြင့် အတ္တသမားတွေကို မွေးထုတ်ပေးနေတာပါ။) လူမျိုးရေးမျက်ကန်း ဖြစ်နေတဲ့သူတွေဟာ ငါ့အယူဝါဒ၊ ငါ့ခေါင်းဆောင်၊ ငါ့ဘုန်းကြီး၊ ငါ့ပါတီ၊ ငါ့စစ်တပ်၊ ငါ့မိသားစု၊ ငါ့ကလေး၊ ငါ့ကိစ္စ စတဲ့ အတ္တစိတ်တွေ ကြီးထွားနေတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ချင်းစာနာစိတ်တွေလည်း ကင်းမဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီအတ္တသမားတွေဟာ မိမိလူမျိုးနဲ့ မိမိတိုင်းပြည်ကို အကျိုးမရှိဘူးဆိုတာ မွတ်ဆလင်တွေ အချင်းချင်း သတ်ဖြတ်နေတာ၊ အဖြူတွေအချင်းချင်းသတ်ဖြတ်နေတာကို ကြည့်ပြီး သင်ခန်းစာ ယူနိုင်ပါတယ်။ ဒီမိုလုပ်စားနှင့် နအဖ လုပ်စားတွေ ပေါများနေတာကလည်း အတ္တစိတ်တွေနဲ့ ဆက်စပ်မှုတွေ ရှိပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတွေရဲ့ အပြစ်ကို မြင်လာမယ်ဆိုရင် အတ္တသမားတွေ ပပျောက်ရေးကို လုပ်နိုင်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါဆိုရင် ကျုပ်တို့ နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း နိုင်ငံဖြစ်လာမှာပါ။ ကျုပ်တို့အမြင်က လက်တွေ့ကျ မကျဆိုတာကို စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာ။
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏တရားများသည် လောကီတွင် အကျိုးရှိကြောင်း သိမြင်တဲ့